Global Voices teny Malagasy » Kiobà: Ho Fiarovana ny “Las Damas” · Global Voices teny Malagasy » Print
Kiobà: Ho Fiarovana ny “Las Damas”
Voadika ny 27 Jolay 2011 16:51 GMT 1	 · Mpanoratra Janine Mendes-Franco Nandika nirinandrea
Sokajy: Amerika Latina, Kiobà, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fifindràmonina, Fivavahana, Hafanàm-po nomerika, Politika, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona
Manohy hatrany manavao ny lahatsorany ireo Kiobana mpitoraka bialogy mikasika ny fanafihana farany  tao Las Damas de Blanco  (The Ladies in White Ireo Vehivavy Mitafy Fotsy), ka nisy tamin'ireo mpikambana no voalaza fa nizaka “fanafihana ary daroka an-kerisetra  nataon'ny olona mpikambana ao amin'ny Mpitandro Filaminam-Panjakan'i Castro teo ampivoahana indrindra ny faritry ny tempoly masina”.
Ny Fiaraha-mientan'ireo vehivavy Kiobana sy Amerikana  dia namoka fanambarana an-gazety iray manameloka ilay fanafihana, izay ahitanaireo vehivavy ao anaty lahatsary iray misy feo [es] mihitsy aza, dia i Tania Montoya Vázquez, mifandraika amin'ny zavatra efa niainany. El Cafe Cubano  namerina nanaparitaka ilay fanambaràn'ilay Fiaraha-mientana mba ho mariky ny firaisankina.
Nikiakiaka ny teny faneva ireo Vehivavy Mitafy Fotsy na The Ladies in White . Sary avy amin'ilay mpampiasa Flickr Globovisión (CC BY-NC 2.0).
Babalu  maneho ny heviny mikasika ny “fandraisam-peo ilay mpitarika ny mpanohitra, Tania Montoya Vazquez, izay niantso ny Hablalo Sin Miedo rehefa nitranga ny daroka an-kerisetra natao an'ireo Vehivavy Manao Fotsy na The Ladies in White omaly”, nilaza hoe :
Tsapanao avy amin'ny alalan'ny feony ny hakiviana sy tahotra. Na dia tsy mahazo sy tsy miteny ny teny Espanola aza ianao, ny lantom-peony sy ny hiaka manako avy any ambadika any dia efa azo andanjàna ny herisetran'ny fitondrana jadon'i Castro.
Nahatonga fampiakaram-peo avy amin'ny vondrona hafa koa ilay raharaha; jereo ny fanambaran'ny Federasiona Manerantanin'ny Tanora Tia Fahalalahana, ato hoe :
Voatifitra teo amin'ny tànana i Belkis Cantillo Ramirez, raha vokapoka mafy tamin'ny kibay, vato ary fitaovana hafa ny sasany. Tanatin'ilay herisetra, Tania Montoya sy Rodaisa Corrioso dia nosamborin'ireo manampahefana. Tetsy ankilany dia vehivavy mahery fo roa, mpikambana telo ambiny folo ao amin'ny fikambanana, ao anatin'izany i Belkis Cantillo Ramirez, no nahazo fitsabona teny amin'ny hopitaly tao an-toerana.
Ny International Federation of Liberal Youth (IFLRY) – Federasiona Iraisam-pirenen'ny Tanora Tia Fahalalahana dia nanameloka tamin'ny teny mahery ilay fanafihana. Las Damas de Blanco dia tena fihetsiketsehana am-pilaminana. Mandoko tsara mihitsy ny fitondrana famoretan'i Castro raha hetsika am-pilaminana toy izany no valiana amin'ny alalan'ny herisetra. Raha tsy sazian'ny fanjakana izao fanafihana izao, dia tokony hisy fanadihadihana avy hatrany ary omena izay tena mahataka-davitra amin'ny resaka fitsarana.
Tonga tamin'ny fangatahana ny “famoahana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra an'i Tania Montoya sy Rodaisa Corrioso”ilay fanambarana, raha mbola manoratra kosa i Babalu lahatsoratra iray hafa  miaraka aminà pitsony maro mahatohina ” (ahitàna saripika), milaza hoe:
Topimaso malaky tamin'ity maraina ity tao amin'ny vohikala tantanin'ny sasany amin'ireo ‘manampahaizana manokana momba an'i Kioba’ tena malaza no tsy mba nahitàna fitenenana momba io fanafihana feno herisetra tamim-behivavy mahery fo tsy nanam-piarovana ireo. Ny fitantaràna naroson'ireny ‘manampahaizana manokana’ ireny dia fitaratra maneho ny fitantarana avy amin'ny fitondrana Castro…Tsy vonona ny andrehitra ny jiron'ny fahamarinana momba ilay tranga mahatsiravina ry zareo …
Uncommon Sense  koa  nanampy tamin'ny filazàna fa :
Amin'ny anarany, ny mpitondra teny iray avy ao amin'ny fiangonana katolika ao Santiago de Cuba dia nanamafy ilay vaovao , ary nanameloka ilay fanafihana.
Voamarina fa fomba fijery mahaliana izany, nandray ny tsetsatsetsa navoakan'i Babalu  tao amin'ny matoandahatsoratry ny USA Today  nilaza fa:
Ny Kioba aty aorian'i Castro dia mila olona itokisan'ny sehatra rehetra amin'ny fiarahamonina hanampy hitandrina ity firenena ity ho amin'ny vanim-potoana iray vaovao, tsy misy rà latsaka na korontana. Kardinaly Jaime Lucas Ortega y Alamino, arsevekan'ny Havana, io lehilahy io. Zanak'ilay mpiasa amin'ny orinasa mpanodina siramamy, Ortega irery no ampy ho fitaovana hameno ny toerana banga eo amin'ny fitondràna.
Nandà mafy  i Babalu :
Ao anaty tsy firaharahàna tsotra izao sy fiavonavonana, Pinsky manolotra ho Filoha ny iray amin'ireo tena mpanao kolikoly sy mpamita-bahoaka ao Kioba amin'izao fotoana ka tsy niraharaha ireo mpitarika tsara toa an-dry Dr. Oscar Elias Biscet, izay tsy nankasitraka an'i Ortega, izay tsy niàla tamin'ny heviny na nanaiky hataon'ireo mpanao jadona ho fitaovana politika.
El Cafe Cubano  nanohana io fomba fijery io, nilaza hoe :
Ny Alahady lasa teo tao ‘Santiago de Cuba, tanàna iray ao faritany atsinanan'i Kioba, vehivavy mafàna fo mpandàla ny demokrasia no nodàrohan'ny polisim-panjakana sy nompany teny an-dàlana taorian'ny namonjen'izy ireo ny fotoam-pivavahana tao Basilica of El Cobre, toerana katolika iray natao hankalazàna an'i Our Lady of Charity (Ilay Vehivavy Mpiantra Anay) , terana nivavahan-dry zareo ho an'ny fahalalahan'ireo gadra politika ao Kioba sy ny fahalalahan'ny Kioba.’
Mangina ny Fiangonana Katolika ary manodina ny fijeriny ho any an-kafa…
Tsy misy isalasalana, ny zanak'i Kioba any ampielezana dia hanohy hanaraka ny fivoarana ka hanome fanohanana eo amin'ny habaky ny serasera ho an'ireo The Ladies in White (Vehivavy Mtafy Fotsy).
Ny sarikely ampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity, “Las Damas de Blanco gritan consignas” , dia avy amin'ny Globovisión, nampiasaina nahazoana alalàna tsy ho azo amidy Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Creative Commons License . Tsidiho ny sary mifandimbin'ny Globovisión .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/07/27/19991/
 fanafihana farany: https://globalvoicesonline.org/2011/07/18/cuba-female-activists-reportedly-beatendetained/
 Las Damas de Blanco: http://en.wikipedia.org/wiki/Ladies_in_White
 “fanafihana ary daroka an-kerisetra: http://babalublog.com/2011/07/ladies-in-white-violently-attacked-yesterday-by-castro-state-security/
 Fiaraha-mientan'ireo vehivavy Kiobana sy Amerikana: http://coalitionofcubanamericanwomen.blogspot.com/2011/07/ladies-in-white-beaten-dragged-and.html
 lahatsary iray misy feo: http://www.martinoticias.com/noticias/Agreden-a-opositoras-en-Santiago-de-Cuba--125710308.html
 El Cafe Cubano: http://elcubanocafe.blogspot.com/2011/07/cuba-ladies-in-white-beaten-dragged.html
 ato hoe: http://iflry.org/blogs/mos/archive/2011/07/18/Condemnation-of-Cuba_2700_s-Continuing-Crackdown.aspx
 lahatsoratra iray hafa: http://babalublog.com/2011/07/ladies-in-white-beaten-dragged-and-stoned/
 dia nanamafy ilay vaovao: http://www.ddcuba.com/derechos-humanos/5877-fuente-de-la-iglesia-confirma-la-paliza-de-el-cobre-contra-dieciseis-damas-de-
 USA Today: http://www.usatoday.com/news/opinion/forum/2011-07-18-castro-cuba-cardinal-ortega_n.htm
 El Cafe Cubano: http://elcubanocafe.blogspot.com/2011/07/looking-other-way.html
 Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0) Creative Commons License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/deed.en